नेपाली फिल्मको खुम्चिएको बजार, तर चर्को हल्ला – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsनेपाली फिल्मको खुम्चिएको बजार, तर चर्को हल्ला
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कुनै समय नेपालमा साउथका सुपरस्टार रजनीकान्तको सिनेमाले मात्र प्रवेश पाउथ्यो । कारण, साउथका अन्य कलाकार नेपाली दर्शकका लागि नौलो थिए । यसैले त्यहाँका सिनेमा किनेर नेपालमा ल्याउने हिम्मत कसैले गरेन ।
तर, अब विस्तारै नेपालमा साउथका चर्चित अभिनेताहरु प्रभास, यस, महेशबाबु सम्मका सिनेमाले प्रवेश पाउन थालेका छन् । यो क्रम बढ्दै जाने देखिन्छ ।
यसको अर्थ के भने, साउथले विश्व बजारमा पारेको प्रभाव अब नेपाली बजारमा पनि पर्दैछ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फिल्मले भोग्ने कुरामा त दुइमत रहेन ।
विश्व बजारमा अहिले विभिन्न भाषाका सिनेमाले प्रभाव पार्न थालेका छन् । चीनमा हलिउड सिनेमाले सबैभन्दा बढी कमाएको छ । अहिले त बलिउड सिनेमा पनि चीनमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।
विश्व बजारमा विभिन्न देशका सिनेमाले प्रवेश पाइरहँदा हाम्रो सिनेमा क्षेत्र भने नेपालका सय वटा हलमा किन खुम्चिरहेको होला ? नेपाली सिनेमालाई विश्व बजारमा पुर्याउन पहल गर्न भन्दा पनि त्यही भएका सय वटा हलमा पनि तेरो र मेरो सिनेमा भनेर निर्माता आफै सकिन तयार छन् ।
सय वटा हलमा चल्ने नेपाली सिनेमाका निर्माताले कुनै मल्टिप्लक्सेमा १० शोज भन्दा बढी पाए भने खुशी मनाएर पार्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ र गर्छन् पनि ।
यसको अर्थ हो, हामी कती सानो बजारमा खुम्चिएका छौ । नेपाली दर्शक विश्व बजारमा छन् । तर, ती दर्शकलाई सिनेमा सिधै हलमा देखाउन आजपनि हामी असमर्थ छौ । बरु, कुनै देशमा रेष्टुरेन्टमा दर्शकलाई आइदिनोस् भनेर टिकट वेचेर हामी बजार खोजिरहेका छौ ।
नेपाली सिनेमा स्पष्ट नेपाली भाषामा नै वुझ्ने सिक्किम, दार्जिलिङ, बर्मा लगायतका स्थानमा नेपाली फिल्म अझै पुग्न सकेको छैन । यो बारेमा पहल गरिदिने कसले ? निर्माता संघले चीनको बजार खोज्दा देशको छेउमै रहेको र नेपाली वुझ्ने दर्शक भएको बजार देखेको छैन ? यो बिषयमा सरकारसँग कुनै पहल पनि भएको छैन ।
हामी, सानो बजारमा स्टार । तैपनि आफ्नो स्टारडममा घमण्ड गरिरहेका छौ । कहिले नेपाली सिनेमाले विश्व बजारमा स्थान पाउला ? कसले खोज्छ बजार ? साच्चै, सधै यही सय वटा हलमा बल्ल बल्ल पाएका सिमित शोजमा खुम्चिएर बस्ने हो ?
March 27, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0